Baikal ရေကန်သို့ခရီးစဉ် ခရီးသွားသတင်း
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးရေချိုအိုင်သည်ပမာဏရှိသည် Bailkal ရေကန်။ မြောက်အမေရိက၏ရေကန်ကြီးများထက်ရေပိုမိုပါ ၀ င်သည်။ အားလုံးအတူတကွစုစည်းထားသည်။ သိသာထင်ရှားသည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ဒါဝေးဝေးပါပဲ ရုရှားရှိဆိုက်ဘေးရီးယား။
အနည်းငယ်ထူးဆန်းသောနေရာများသို့သွားရာရေကန်သည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအံ့ဖွယ်နေရာ၊ မည်သည့်ပုံစံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်နှင့်ယခုအချိန်အထိမည်သို့ရရှိနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုကြမည်။ ကြည့်ရအောင် Baikal ရေကန်သို့ခရီး။
1 Baikal ရေကန်
2 Baikal ရေကန်တွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်း
အင်းအိုင် ရုရှားအရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်ရှိသည်ကြီးမားသောဘူမိဗေဒဆိုင်ရာကျိုးပဲ့နေသောချိုင့်ဝှမ်းတွင်ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ကိုတဖြည်းဖြည်းခွဲခြားသွားစေသည်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အငယ်ဆုံးကျိုးပဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်တက်ကြွစွာရှိပြီးတစ်နှစ်လျှင် ၂ စင်တီမီတာနှုန်းဖြင့်ဖွင့်သည်။ ဒါကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်။ သေချာတာပေါ့၊ မကြာခဏငလျင်များမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည် နှင့်အပူစမ်းပေါက်။
အင်းအိုင် အရှည် ၆၃၆ ကီလိုမီတာနှင့်အကျယ် ၇၉ ကီလိုမီတာရှိသည်ဟုတ်တယ် အာရှ၏အကြီးဆုံးရေကန်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အနက်ဆုံးသောရေကန် 1642 မီတာအနက်နှင့်အတူ။ Baikal ရေကန်ကိုခွဲခြားထားသည် အင်တုံသုံးs, တောင်ဘက်, မြောက်ဘက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနက်နဲသောပင်လယ်နှင့်အတူအလယ်ပိုင်း။ ကန်ဘယ်လောက်အသက်လဲ? ဒါဟာအကြားကတွက်ချက်သည် နှစ်ပေါင်း 25 သန်းနှင့်သန်း 30 ဒါ့အပြင်၎င်းရဲ့အောင်မြင်မှုစာရင်းကိုလည်းဘူမိဗေဒသမိုင်းမှာသက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောရေကန်အဖြစ်ထပ်ထည့်ထားပါတယ်။
အမှန်မှာ၊ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းခြောက်သန်းမှ ၇ သန်းအတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဝေးလံသောအနက်မှထုတ်ယူသောအနည်အနှစ်များမှကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များစွာကိုရရှိခဲ့ကြသည်။
Baikal ရေကန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တောင်များကဝိုင်းရံနှင့် ကျွန်းများစွာလည်းရှိ၏ အကြီးဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးပေမယ့်ဖြစ်ပါတယ် Olkhon ကျွန်း။ ဒီကျွန်းသည် ၇၂ ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီး၎င်းအရွယ်အစားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ထိုမြစ်တွင်မြစ်လက်တက် ၃၀၀ ကျော်ရှိသည်။
၎င်း၏ရေသည်စင်ကြယ်သည် နှင့်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ပို။ ပင်ပွင့်လင်းရရှိသည်။ ဤအချိန်တွင်မြင်ကွင်းသည်မီတာ ၃၀ မှ ၄၀ ကြား၊ နွေရာသီတွင် ၅ မှ ၈ မီတာကြားတွင်ရှိသည်။ ၎င်း၏ရေလည်းရှိပါတယ် အောက်စီဂျင်အလွန်ကြွယ်ဝသောပင်ကြီးစွာသောအတိမ်အနက်မှာ။ သူတို့ကအတိမ်အနက်, တည်နေရာ, တစ်နှစ်၏အချိန်အရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်ရှိသည်။
အရှင်, ဆောင်းရာသီနှင့်နွေ ဦး ရာသီ၌မျက်နှာပြင်သည်အေးခဲနေသည် ဒါကြောင့်တစ်နှစ်ခွဲနီးပါးနေဆဲဖြစ်သည်။ အချို့သောနေရာများတွင်ရေခဲသည်နှစ်မီတာအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျိုးပဲ့သောအခါရေသည်နည်းနည်းပူနွေးလာပြီးသြဂုတ်လ၊ နွေရာသီတွင်ဖြစ်နိုင်ပြီးအချို့သောနေရာများတွင် ၁၅, ၁၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရောက်နိုင်သည်။
ရေကန်တွင်ဘဝများစွာရှိသည်။ အပင်တစ်ထောင်ကျော်နှင့်တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်ရှိသည်80% ခန့်အစုလိုက်မျိုးစိတ်နှင့်အတူ။ မြေခွေးများ၊ ဆိုက်ဘေးရီးယားသမင်၊ ဝံ၊ မြက်ခင်းများရှိသည်။
အခြေခံအားဖြင့် ခရီးသွားဘူတာနှစ်ခုရှိတယ်။ ပထမတစ်ခုက ရေခဲရာသီ ၎င်းသည်ဇန်နဝါရီလလယ်မှစတင်ကာAprilပြီလလယ်အထိဖြစ်သည်။ ရေခဲအထူသည်လာမည့်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်သွားလာရေးကိုအထောက်အကူပြုသည် ပူဖောင်းများပါဝင်သည်စူပါပွင့်လင်းရေခဲ။ ဒါကြောင့်ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲ ရေကန်အနားမှာလမ်းလျှောက်ပြီးလမ်းလျှောက်မယ်၊ rollerblade နဲ့စက်ဘီးစီးတာတောင်တောင်စီးတယ်.
ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ခန့်ရှိသော Olkhon ကျွန်းပတ်လည်ရှိရေခဲပေါ်လမ်းကြောင်းရှိသည်။ ရေခဲတံငါသည်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒီမှာရေပန်းစားနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်၊ ဒီအရာတွေအားလုံးဟာAprilပြီလလယ်၊ အပူချိန်မြင့်တက်လာပြီးရေခဲတွေပိုကွဲလာတယ်။ သေဆုံးမှုများမရှိသောကြောင့်သတိထားပါ။
La ဒုတိယခရီးသွားရာသီ Baikal ရေကန်ပေါ်တွင်တည်ရှိ၏ နွေရာသီ။ The တောင်ပေါ်လမ်းကြောင်း ဥပမာအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတောင်များ၊ Baikal Range နှင့် Barguzin Range တို့ဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များသောစူပါလူကြိုက်များသည့်လမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက် Listvyanka မှအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းသည်အိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်သွားပြီးသင်လုပ်နိုင်သည်မှာ ၅၅ ကီလိုမီတာကျယ်သော Bolshoy GHoloustnoye ဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။
နွေရာသီတွင်ရေခဲမရှိသကဲ့သို့ ဒါဟာရွက်လွှင့်ခြင်းနှင့်လှေခရီးစဉ်ရာသီဖြစ်ပါသည်, ငှက်များနှင့်ငါးများကိုရိုးရာနည်းလမ်းဖြင့်ကြည့်ရှုရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရေကန်၏ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ဗဟိုမှာကျေးရွာဖြစ်သည် Khuzhir နှင့်လည်း Listvyanka။ ဒီရွာကနေပြီး Irkutsk မြို့ဟာ ၂ နာရီကြာသွားပြီးသင်ဒီမှာလေယာဉ်နဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ရေကန်သို့ ဦး တည်ရာသည် Severobaykalskမြောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်မှာ။
ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအိုင်ထဲရှိကျွန်းများစွာထဲတွင်လူကြိုက်အများဆုံးမှာကျွန်းဖြစ်သည် Olkhonအများအပြားကျေးရွာများနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးနေရာတိုင်းတွင်ကျောက်ဆောင်နှင့်ထင်းရှူးပင်များရှိသည်။ Irkutsk မှကီလိုမီတာ ၂၅၀ အကွာတွင်ရှိသည် y သင်ကူးတို့ဖြင့်ရောက် မေလမှဒီဇင်ဘာလအထိ။ Irkutsk ဗဟိုဘတ်စ်ကားဂိတ်ကနေ၊ တစ်ရက်ကိုလေးကြိမ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဗဟိုစျေးကွက်၊ ပြီးတော့ကူးတို့မှသင်ဘတ်စ်ကားစီးသည်။ ဈေးအသက်သာဆုံးနည်းကတော့ယူရို ၂၀ လောက်ပါ။
နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကယူရန်ဖြစ်သည် Irkutsk မှ Olkhon အထိမြန်သောလှေ။ ကူးတို့သင်္ဘောသည် VSRP (အရှေ့ဆိုက်ဘေးရီးယားမြစ်ကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) မှဖြစ်ပြီးတနင်္လာနေ့တိုင်းနံနက် ၈း၃၀ နာရီတွင် Khuzhir သို့ညနေ ၅း၁၅ နာရီတွင်ရောက်ရှိသည်။ ထို့နောက်အရှေ့ဘက်ခြမ်းကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အရေးယူပြီးအိုင်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်သို့ဆက်သွားပါ။ လှေသည်အင်္ဂါနေ့က Irkutsk သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးမြို့ပတ်ရထားလမ်းကြောင်းပြီးသွားသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဇူလိုင် ၇ ရက်မှသြဂုတ်လ ၂၄ ရက်အထိသာအသုံးပြုနိုင်ပြီးဇူလိုင်လ၏နောက်ဆုံးအပတ်တွင်သြဂုတ်လပထမအထိသည်သောကြာနေ့များတွင်နောက်ထပ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုထပ်တိုးနိုင်သည်။
Olkhon သည် Listyanka ကဲ့သို့ခရီးသွား is ည့်သည်မဟုတ်သော်လည်းကောင်းမွန်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများရှိသည်။ စက်ဘီးနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ငှားရမ်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဟိုတယ်များနှင့်ရေလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။.. နှလုံးသားသည်ရွာဖြစ်သည် Khuzhirကျွန်း၏အလယ်တွင်ရှိပြီးကူးတို့ဆိပ်ကမ်းမှမိနစ် ၂၀ ဖြစ်သည်။ ရွာသည်ကမ်းခြေနှင့် ၁၀ မိနစ်သာကွာဝေး။ ပင်မစတုရန်းပတ်လည်ရှိဆိုင်များနှင့်ကဖေးများရှိသည်။ Svetlana ခရီးသွားငှားရမ်းထားသောအိမ်မှဘတ်စ်ကားဂိတ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုမရှိပါ။ လက်မှတ်တွေကိုဒီမှာရောင်းထားပါတယ်
ကျွန်းပေါ်မှာမင်းလုပ်နိုင်တယ် Shaman ဂူသို့လည်ပတ်ပါရေကန်၏ကမ်းခြေနှင့်၎င်း၏ကမ်းခြေများရှိမြင့်မြတ်သောနေရာတစ်ခု၊ စွန့်ပစ်ထားသော Peschanaya ရွာ (သူ၏ဆိုဗီယက်ငါးစက်ရုံနှင့်အတူ), အ Cape Khoboy သို့မဟုတ် Tres Hermanos ဟုခေါ်သောကျောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ကမ်းခြေသည် Khuzhir မှလေးကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိပြီးထင်းရှူးပင်များနှင့်ဝိုင်းရံထားသည် Kharantsvလမ်းလျှောက်ရန်လမ်းလျှောက်ရန် ၂ ကီလိုမီတာသာဝေးသည်။
၎င်းသည် Baikal ရေကန်ပတ်လည်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေကန်ကိုသွားဖို့လှပတဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုကငါဆိုလိုချင်ပါတယ် Trans-Siberian ။ ၎င်းသည်လေယာဉ်နှင့်တူညီသော်လည်းကုန်ကျစရိတ်မှာအဆတစ်ထောင်ပိုမိုများပြားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ရထားလေးရက်ကြာတယ် ဒီတော့နည်းနည်းလေးခရီးပဲ။ အကယ်၍ ဤအရာသည်သင့်ကိုမပိတ်နိုင်လျှင်၊ မော်စကိုမှ ၆ နာရီ၊ Irkutsk သို့မဟုတ် Olan-Ude သို့လေယာဉ်။ ထိုနေရာတွင်ရှိလျှင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများသည်အပျော်စီးသင်္ဘောများ၊ ငါးဖမ်းလှေများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ အငှားကားများ၊ မီးရထား၊
ရေကန်ကြီးသည် အကွာအဝေးတိုတောင်းကြသည်မဟုတ်။ Irkutsk မှ Olkhon ကျွန်းသို့ခြောက်နာရီကြာသည်။ Goryachinsk ရေကန်၏အရှေ့ဘက်ရှိတောရိုင်းကမ်းခြေသည် ၅ နာရီဖြစ်သည်။ လှေဖြင့်သွားခြင်းသည်လမ်းကြောင်းယူခြင်းထက်များစွာကောင်းသည်မှာသေချာသည်။ ကူးတို့အနေဖြင့် Irkutsk မှ Listvyanka (နံနက် ၈း၃၀၊ မွန်းတည့် ၁၂း၀၀ နှင့်ညနေ ၂း၀၀) အထိတစ်နေ့လျှင်အမြန်လှေ ၃ စီးရှိသည်။ တစ်နာရီလျှင် ၁၀ ယူရိုကုန်ကျသည်။
နွေရာသီလများတွင်အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ကူးတို့ဆက်သွယ်မှုလည်းရှိသည်။ အမှန်တရားကတော့ အိုင်ပတ်ပတ်လည်လမ်းမရှိ, ဒါပေမယ့်သင်တောင်ဘက်ခြမ်းရှိအချို့သောအချက်များကိုကားဖြင့်သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကူးတို့ဖြင့်ဖြတ်ကူးပြီး Olkhon ကျွန်းသို့ကားမောင်းနိုင်သည်။ ဒီမှာဓာတ်ဆီဝယ်ဖို့ကကုန်ကျတယ်။ ဒါကိုစိတ်ထဲထားဖို့ကြိုးစားပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကမင်းကိုအစေခံစေပြီး Baikal ရေကန်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားကြည့်ရှုရန်အားပေးပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » Baikal ရေကန်သို့သွားပါ